Global Voices teny Malagasy » ‘Te hiaina izahay’: an-tapitrisany ireo Siriana ampijalian’ny hanoanana sy ny hetaheta ao Yarmouk natao fahirano · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Desambra 2019 19:43 GMT 1	 · Mpanoratra Syria Untold Nandika (fr) i Marie André, imanoela fifaliana
Sokajy: Syria, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Tanora, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Navoaka voalohany tao amin'ny SyriaUntold  ity lahatsoratra ity.
Miaraka amin'ny fiharatsian'ny loza Siriana isan'andro, mifantoka kokoa amin'ireo fifandonana jeopôlitika sy ara-tafika ny sain'izao tontolo izao. Tsy misy miraharaha ireo olana hafa na dia mavesa-danja aza. Azo tanisaina ny olan'ny fanaovana fahirano ny toby Palestiniana ao Yarmouk izay efa naharitra herintaona mahery izay. Ny hetaheta no vokatra farany tamin'ny fanaovana fahirano an'i Yarmouk, izay mampijaly ireo mponina efa herinandro maromaro izay. We Want to Live: Thirst Under Siege  (Te Hiaina Izahay: Hetaheta Ambany Fahirano), izany no anarana nomena ny hetsipanentanana malaza iray izay natao mba hisarihana ny saina amin'ity olana lehibe ity.
Efa hatramin'ny 17 desambra 2012 i Yarmouk no natao fahirano amin'ny ampahany, ary natao fahirano tanteraka kosa nanomboka ny 17 Jolay 2013. Olona 170 eo fara-fahakeliny no matin'ny hanoanana, ary mihoatra ny 20.000 ireo mbola miaritra ilay fanaovana fahirano. Tsy maintsy niaritra fanafihana miverimberina , fanafihana an'habakabaka ary famafazana baomba mahery vaika taminà tranobem-bahoaka, fianarana, hôpitaly sy moske ihany koa ilay tanàna.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/12/25/146079/
 fanafihana miverimberina: http://www.amnesty.org/en/news/syria-yarmouk-under-siege-horror-story-war-crimes-starvation-and-death-2014-03-10